इन्सेक अध्यक्षमा डा. इन्दिरा श्रेष्ठ निर्वाचित – इन्सेक
इन्सेक अध्यक्षमा डा. इन्दिरा श्रेष्ठ निर्वाचित
काठमाडौँ ०७६ कात्तिक २२ गते
काठमाडौँमा कात्तिक २२ गते सम्पन्न इन्सेकको २३ औँ साधारण सभाले डा. इन्दिरा श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यसमितिको चयन गरेको छ ।
साधारण सभाले कार्यसमितिका सदस्यहरूमा दीपकराज काफ्ले, नजिर मियाँ, गीता बराल, रुद्रबहादुर चर्मकार, रघुनाथ अधिकारी र शोभाकर बुढाथोकी निर्वाचित गरेको इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएलगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका सवालमा इन्सेक अभियानलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने बताइन् ।